DF oo Axmed Madoobe ku celisay guddiga doorashada, kana hor-timid laba arrin | Warkii.com
Home warkii DF oo Axmed Madoobe ku celisay guddiga doorashada, kana hor-timid laba arrin
Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay Warkii.com ayaa sheegayaa in dib loogu celiyay maamulka Jubaland 8-da xubnood ee guddiga doorashooyinka heer dowlad gobaleed, kadib markii la sheegay in Villa Somalia dacwad uga gudbisay beesha caalamka.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa dalbatay in guddiga oo ay ku jirto hal gabar, lagu soo daro laba gabdhood oo kale si loofuliyo heshiiskii lagu gaaray Muqdisho ee doorashooyinka.
Dhanka kale, Villa Somalia ayaa dalbatay in la badalo guddoomiyihii guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee Jubaland Xamza Cabdi Barre oo qeyb ka ah guddiga cusub ee Jubaland u soo dirsadeen doorashooyinka heer maamul gobaleed.
Xubnaha beesha Caalamka ayaa Villa Somalia ku taageeray in la ilaaliyo qoondada dumarka balse waxaa laga diiday dooda ku saabsan halka qof ee guddiga jira oo lagu magacaabo Xamza Cabdi Barre.
Waxaa la filayaa in Madaxweyne Axmed Madoobe uu dib ugu laabto magacaabista guddigaan islamarkaana uu soo dhameystiro qoondada dumarka, dibna usoo magacaabo maalmaha soo socda.
Previous articleDonald Trump oo diiday inuu ogolaado in laga adkaaday, tallaabo-na qaadaya Isniinta
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo war kasoo saaray natiijada doorashada Mareykanka xilli Trump uu diidan yahay
Wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta rag hubeysan ay weerar sababay dhimasho iyo dhaawac ka...